उपनिर्वाचन अपडेट : कसले कहाँ कहाँ जिते
काठमाडौं । शनिबार सम्पन्न उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले अधिकांश वडाहरुमा जित हासिल गरेको छ । प्राप्त मतपरिणाम अनुसार नेकपाले अधिकांश वडामा जितेको घोषणा भइसकेको छ भने गणना जारी रहेका वडामा पनि नेकपाले नै अग्रता लिइरहेको छ । नेकपाका उम्मेदवारले जितेका वडा बाजुरा – जिल्लाको
सुदूरपश्चिमका सात स्थानमा नेकपा ५ र कांग्रेस २ स्थानमा विजयी (मतसहित)
काठमाडौं । सुदूरपश्चिममा सात जना वडाध्यक्षका लागि१४ मंसीरमा भएको उपनिर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पाँच र नेपाली कांग्रेसले दुई स्थानमा जित हासिल गरेका छन् । नेकपाका विजयी उम्मेदवारहरुमा कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिका–३ मा कृष्ण बहादुर तामाङ, डोटीको आदर्श गाउँपालिका–२ मा रामबहादुर
भक्तपुर प्रदेशसभामा कांग्रेसका भँडेल विजयी
काठमाडौं । भक्तपुर प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ को क मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कृष्णलाल भँडेल विजयी भएका छन् । भँडेल १३ हजार ४४९ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी नेकपाका देवीप्रसाद ढकालले ११ हजार २०६ मत प्राप्त गरेका छन् । नेमकिपाका निरज लवजुले ५ हजार ८२९ मत प्राप्त गरेका छन् । शनिवार
उपनिर्वाचन अपडेट : भक्तपुरमा नेपाली कांग्रेसको अग्रता कायमै
काठमाडौं। भक्तपुर प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ को प्रदेशसभा १ मा नेपाली कांग्रेसले अग्रता कायमै राखेको छ । अहिलेसम्म चाँगुनारायण नगरपालिका अन्तर्गतका वडा नं १, २, ३, ४, ५,६ र ७ को मतगणना सकिँदासम्म नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कृष्णलाल भंडेलले १० हजार ३९५ मत पाउँदै अग्रता बनाएका छन्। अहिलेसम्म चाँगुनारायण
उपनिर्वाचन अपडेटःधरानमा ३ वटा वडाको मतगणना सकिँदा नेकपाको अग्रता
काठमाडौं। सुनसरीको धरान उपमाहानगरपालिकामा नेकपाले थोरै मतको अग्रता बनाएको छ। वडा नं १८, १९ र २० को मतगणना सकिँदासम्म नेकपाका उम्मेदवारले १७ मतको अग्रता कायम गरेका छन्। धरानमा नेकपाका उम्मेदवार प्रकाश राई थोरै मतान्तरले अगाडि छन्। उनलाई कांग्रेसका तिलक राईले पछ्याइरहेका छन्। नेकपाका प्रकाश राईले
शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न, आजै मतगणना शुरू हुने
काठमाडौं। उपनिर्वाचन अन्तर्गत देशका ३७ जिल्लामा भएको मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। बिहान ७ बजेदेखि शुरू भएको मतदान साँझ ५ बजे सकिएको छ । कास्कीमा विस्फोटका केही घटना भएपनि शान्तिपूर्ण रूपमा नै मतदान भएको आयोगले जनाएको छ। उपनिर्वाचन भएको प्रतिनिधिसभाको एकमात्र क्षेत्र
‘प्रधानमन्त्री पूर्ण स्वास्थ्यलाभ गरेर अर्को हप्ता डिस्चार्ज हुनुहुने’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यबारे तथ्यभन्दा अतिरञ्जित खबर बाहिर आएको गुनासो प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले मिडियालाई जिम्मेवार र उत्तरादायी पत्रकारिता गर्न आग्रह गरे । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीज्यूको
दिपकलाई कुटेर हत्या गर्ने ४ जना सार्वजनिक
महेन्द्रनगर । ओभरटेक गरेको निहुँमा कुटेर युवकको हत्या गर्ने चार जनालाई कञ्चनपुर प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार बिहान कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ गोबरैयामा महाकाली नगरपालिका– ३ का २२ वर्षिय दिपक पन्तले मोटरसाइकल ओभरटेक गरेको निहुँमा कुटपिट गरेर हत्या गरिएको थियो । हत्या आरोपमा प्रहरीले
ठोस खाना दिन थालिएको छ, पाचन राम्रो देखिएको छ: डा. दिव्यासिंह शाह
काठमाडौँ, मङ्सिर १३ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधारको क्रम जारी रहेको छ । उहाँको फिजिकल तथा बायोकेमिकल मापदण्डसमेत अपेक्षाकृत सुधार आएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जनाउनुभएको छ । “प्रधानमन्त्री ओलीलाई मुखबाट आवश्यक ठोस खाना दिन थालिएको छ, पाचन राम्रो देखिएको छ”,
दैलेखमा माइक्रोबस दुर्घटना,तीन जना मृत्यु १५ घाइते
काठमाडौं । दैलेखमा माइक्रोबस दुर्घटनाहुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । सुर्खेतबाट दैखेल आउँदै गरेको आँउदै गरेको भे १ ज १०२९ नंम्बरको हायस दुर्घटनाहुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको हो । प्रहरीका अनुसार उनीहरूको दुर्घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा दुई जना पुरुष र एक जना महिला छन् । मृतकको सनाखत भएको
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न अस्पतालमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी
काठमाडौं । अस्पतालमा उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अस्पताल पुगेकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारी अस्पतालमा नै पुगेर प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएकी हुन् । प्रम ओली एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गराएर चिकित्सकको निगरानीमा अस्पतालमा
धरहरा पुनःनिर्माणको काम ३० प्रतिशत काम सकियो, निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने
मंसिर १२, काठमाडौं । एतिहासिक धरहरा पुनःनिर्माणको कामले गति लिएको छ । निर्माणको क्रममा हालसम्म करीब ३० प्रतिशत काम सकिएको छ । भूकम्प गएको तीन वर्ष बितेपछि निर्माणको कामले गति लिएको हो । दुई वर्षको अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी रमन कन्सट्रक्शनले धरहराको पुनःनिर्माण शुरु गरेको छ । रू. तीन अर्ब ४८ करोड
मेरो स्वास्थ्य सुधार भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यमा तीब्र गतिमा सुधार भइरहेको बताएका छन्। दुई दिनयता म एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गरी स्वास्थ्य उपचार गराइरहेको छु। यतिबेला मेरो स्वास्थ्य तीब्र गतिमा सुधार भइरहेको छुु । आज बिहान आफ्नो ट्वीटर ह्याण्डलमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य
१३ औं साग : भलिबलमा नेपालले आज भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै
काठमाडौं । १२ मंसिर । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग अन्तर्गत आज पनि भलिबल तर्फका खेलहरु हुने भएका छन् । त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कर्भडहलमा दिउँसो १ बजे र ३ बजे पुरुष भलिबल हुने छ भने अपरान्ह ५ र राति ७ बजे महिला भलिबल हुने छ । दिउँसो १ बजे आज पाकिस्तान र माल्दिभ्स तथा ३ बजे भारत र बंगलादेश बिच प्रतिस्पर्धा
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हस्तकला प्रदर्शनी हुँदै
काठमाडौं। आजदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हस्तकला प्रदर्शनी हुँदैछ। उद्यमी, कलाकार, कालीगढबाट उत्पादित नेपाली हस्तकलाका वस्तुको स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने, नयाँनयाँ निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने, उद्यमीलाई प्रोत्साहित बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारका आयातकर्ताको
पोखरामा नेकपाको चुनावीसभा नजिकै शक्तिशाली बम विष्फोट
काठमाडौं । पोखरामा सत्तारुढ नेकपाले आयोजना गरेको चुनावीसभा नजिकै शक्तिशाली बम विष्फोट भएको छ । कास्कीको नयाँबजार प्रदर्शनी केन्द्र नजिकै केहीबेरअघि बम विष्फोट भएको हो । चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्न नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित नेताहरु बामदेव गौतम, सुवासचन्द्र नेम्वाङ लगायत पोखरामा रहेका छन्
शीर्ष नेतालाई चुनावी चटारो : ‘प्रचण्ड’ले आजै तीन चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै
काठमाडौं । शनिबार हुने उपनिर्वाचनका लागि दलहरूले बुधबार चुनावी प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आजै तीन वटा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दैछन्। प्रचण्डले कास्की २, धरान र भक्तपुरका चुनावी सभालाई बुधबार सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा निरन्तर सुधारः अस्पताल (विज्ञप्तिसहित)
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ। स्वास्थ्यमा सुधार आएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिइएको ुलाइफ सपोर्टु उपकरणसहितको उपचार पद्दति पनि हटाइएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। त्रिवि
प्रधानमन्त्री ओलीको एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एपेन्डिसाइटिस भएपछि आकस्मिक शल्यक्रिया गरिएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा रहेको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा प्रधानमन्त्री ओलीको आकस्मिक शल्यक्रिया गरिएको हो । आकस्मिक पेट दुखेपछि मंगलबार शिक्षण अस्पताल पुगेका प्रधानमन्त्रीको
ट्रयाल फेल भएकालाई लाइसेन्स दिने कार्यालय प्रमुखसहित ३८ जना विरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायलमा फेल भएकालाई पास गराएको आरोपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारीचालक अनुमतिपत्र, प्रदेश नम्बर ३ एकान्तकुनाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित ३८ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको छ । आयोगले यातायात कार्यालयका
ओलीको राष्ट्रवाद चुनाव जित्ने खोल मात्रै : कांग्रेस सभापति देउवा
काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले ल्याउन लागेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट पारित हुन नदिने बताएका छन् । सहमति र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भन्दै देउवाले सरकारले जवरजस्ती गरे सडकमासमेत जाने जनाए । सहमतिको बाटो बन्द गरेर सरकारले
महराको निवेदन आज इजलाससमक्ष पेस हुँदै
काठमाडौं । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गराएको निवेदन आज इजलाससमक्ष पेस हुने भएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको आदेशविरुद्ध महरा उच्च अदालत पुगेका थिए । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध थुनामा पठाउन गरिएको
काठमाडौं। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल कतारमा जारी ‘वल्ड इनोभेशन समिट फर एजुकेशन’ मा सहभागी भएका छन् । शिक्षामन्त्री पोखरेलले कतार र मलेसियाका शिक्षामन्त्रीसँग भेटावार्ता गरेका टन । कार्यक्रमका क्रममा शिक्षामन्त्री पोखरेल र मलेसियाका शिक्षामन्त्री डा. मस्वेली बिन मालिकबीच भएको भेटवार्तामा
कस्ले लगाईदिने द्धन्द्धपिडितको घाउमा मलम
काठमाडौं । सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १३ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते दुई पक्षबीच सम्झौता भएपछि माओवादीको सशस्त्र द्धन्द्ध अन्त्य भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको परिकल्पना र चाहना अनुसार शान्ति प्रक्रियाका सबै काममा खासै प्रगति भएको देखिएको भने छैन
आज 'विश्व टेलिभिजन दिवस'
'काठमाडौं । आज ‘विश्व टेलिभिजन दिवस’ विश्वभर मनाईंदै छ । सन् १९९६ डिसेम्बर १७ मा बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले हरेक वर्ष नोभेम्बर २१ मा विश्वभर टेलिभिजन दिवस मनाउने निर्णय गरे हो । सन् १९३० को दशकमा प्रसारण सुरु भएको टेलिभिजन प्रविधि यतिबेला सशक्त सञ्चारमाध्यमका रुपमा विकास भएको छ। सन् १८८८
नवनियुक्त मन्त्रीको शपथ शीतल निवासमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेपछि आज नयाँ मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण हुने भएको छ । बुधबार नयाँ नियुक्ति पाएका ९ जना मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण आज हुने भएको छ । बिहान ११ बजे राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शपथग्रहण गर्ने भएको हो । राष्ट्रपति
बेपत्ता भएको आयल निगमको ट्याङ्कर फेला पर्यो
काठमाडौं । सिरहाको लहानबाट ‘गायब’ पारिएको नेपाल आयल निगमको ट्याङ्कर धनुषाको रामदहैयामा फेला परेको छ । सिराहाका डिएसपी अपिल बोहराका अनुसार सो ट्ंयाकर राम मन्दिर छेउँको हाइवेमा पार्किङ गरेर राखेको अवस्थामा फेला परेको हो । ट्याकंर फेला परेपनि ट्याकरमा भएको २० हजार डिजल र ट्याकर गायब पार्ने समूह भने
आज मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मङ्गलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै मन्त्रिपरिषद हेरफेर हुने स्पष्ट सङ्केत गरेका थिए । स्रोतको अनुसार मंगलबार नै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद